Nyanzvi Dzozeya Zvingabude muRwendo rwaVaTsvangirai
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, avo vari kushanya muAmerica, vari kuedza kumutsiridza hukama hweZimbabwe nenyika dzekumawirira, uho hwakafa makore gumi apfuura.
Zvikuru zviri kutarisirwa neveruzhinji ndezvekuti kushanya kwaVaTsvangirai uku, kungaita here kuti zvirango zvekufamba zvakatemerwa vakuru vemubato reZanu PF, uye zvinonzi naVaMugabe zvakatemerwa nyika zvingabviswa here.
Nyika dzakaita seNetherlands neAmerica dzakatobuda pachena kuti kana hurumende yemubatanidzwa ichida kuwana rubatsiro, ngaitange yagadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro.
America iri kutarisirwa kunyevenutsa mwoyo wayo, zvichitevera mashoko asachigaro wekomiti inoona nezveAfrica mudare reparamende, VaDonald Payne, ekuti pabviswe zvimwe zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, kwosiiwa zvakatemerwa vamwe vakuru veZanu PF nehurumende.
Jonga Kandemiiri weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, pamwe naVaBriggs Bomba, Campaigns Director musangano reAfrica Action, kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Hurukuro naProfessor John Makumbe naVaBriggs Bomba